Zvimwe zvakawanda zveElavil (amitriptyline) uye APO-Amitriptyline yakarangarirwa nekuda kwekusvibiswa kwenitrosamine |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Zvimwe zvakawanda zveElavil (amitriptyline) uye APO-Amitriptyline inorangarirwa nekuda kwekusvibiswa kwenitrosamine.
Zvimwe zvakawanda zveElavil (amitriptyline) uye APO-Amitriptyline inorangarirwa nekuda kwekusvibiswa kwenitrosamine.
AA Pharma Inc. iri kurangarira mijenya miviri yeElavil (amitriptyline) (mijenya PY1829 nePY1830) uye Apotex Inc. iri kurangarira imwezve yakawanda yeAPO-Amitriptyline (lot PY1832) 10 mg mapiritsi nekuda kwekuvapo kweNDMA, tsvina yenitrosamine, pamusoro pemuganhu unogamuchirwa. Varwere vanogona kuenderera mberi nekutora mishonga yavo yeamitriptyline, sezvo njodzi dzekusava nekurapa kwakakwana dzinopfuura mhedzisiro inobvira yekuratidzwa kumazinga eNDMA anoonekwa mune zvinoyeukwa zvigadzirwa. Varwere havadi kudzorera mishonga yavo ku pharmacy.
NDMA inorongedzerwa seanogoneka kenza yemunhu. Izvi zvinoreva kuti kuratidzwa kwenguva refu kune imwe nhanho pamusoro peinoonekwa seyakachengeteka kunogona kuwedzera njodzi yegomarara. Hutano Canada iri kupa zano kuti hapana njodzi inokurumidza mukuenderera mberi nekutora yakayeukwa APO-Amitriptyline kana Elavil (amitriptyline) sezvo njodzi inogona kuitika yegomarara iri nekuratidzwa kwenguva refu (zuva nezuva kwemakore makumi manomwe) kune NDMA inopfuura mazinga akachengeteka.
Hutano Canada inochengeta runyorwa rweanoyeukwa amitriptyline mishonga yakakanganiswa nenyaya iyi. Ndokumbira utarise kuraira kwakazara kune rumwe ruzivo, kusanganisira zvimwe nezve njodzi uye izvo varwere vanofanira kuita.
kambani chigadzirwa simba DIN Roti Kupera
Nhoroondo ye AA Pharma Inc. Elavil
Nhoroondo ye Apotex Inc. APO-Amitriptyline
Kanadha utano Utano Canada
Composting Yevanhu Yave Kuwanika kune Vagari veCanada
Kuvimbisa New Anticancer Makomisheni
FRAPORT Key Operating Figures Inovandudza Zvinoonekwa
Gurukota rezvekushanya kweJamaica Kutungamira Global Mega Marketing...
Tsvagiridzo Itsva Yekushandisa Psychedelics Kurwisa Pfungwa...